အရူးစီမံကိန်းမဟုတ်ဘဲဘေးအန္တရာယ်တပ် RayHaber | raillynews
[17 / 02 / 2020] Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Test Drive Made	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[16 / 02 / 2020] Imamoglu သည် Mecidiyekoy Mahmutbey Metro Line စတင်ဖွင့်သည့်နေ့ကိုကြေငြာခဲ့သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အရူးမဟုတ်စီမံကိန်းများ, ဘေးဥပဒ်ကိုတပ်
16 / 12 / 2013 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
အရူးမဟုတ်စီမံကိန်းများ, ဘေးဥပဒ်ကိုတပ်: အတိတ်ကာလအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တစ်ဦးရေတဖြည်းဖြည်းအနက်ရောင်မြို့သို့လှည့်သည့်အခါ။ ဤသည်အစဉ်အမြဲမယ့်နိုင်ငံရေးတော့ဘဲအတွက်တက်ကြွလာခဲ့သည်။
3 ။ တံတား,3။ လေဆိပ်နှင့် Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်၏အခြေအနေတွင်အဆိုပါအခြေချစီမံကိန်းသည်သင်္ချိုင်းသို့သွားဒီနောက်ဆုံးသုံးကွင်း။
ရာကနေကြီးမြတ်မတရားမှုကိုစီမံကိန်းများကိုစတင်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ယခုဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ snubbed မြို့ပြနှင့်ဒေသဆိုင်ရာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏သိပ္ပံသက်သေခံ။
မကြာသေးမီကကာလအတွင်းမှာလည်းဆီလျှော်အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှု။ နှစ်ဦးစလုံးပြင်ဆင်ခြင်းတရားသူကြီးတွေ, ကျွမ်းကျင်သောအစီရင်ခံစာသည်ဤစီမံကိန်းများနှင့်အတူဆက်လက်၏ဆန့်ကျင်အပေါ်ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။
Yildiz နည်းပညာတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခမှသည် ဒေါက်တာ Betul Sengezer Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းအဆင့်အတန်းအပေါ်သူ၏အလုပ်ထုတ်ဖေါ်။
Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းဧရိယာ၏ 30 တထောင်ဟက်တာ။ ဤသည်ဝန်ကြီးများကောင်စီတို့ကတစ်နေရာအစ္စတန်ဘူလ်၌ရှိသမျှသော built-တက်ဧရိယာ၏ထက်ဝက်ပြည်နယ်အတွင်းရှိစီမံကိန်းဧရိယာကြေညာဆိုလိုသည်။
ဒီအရူးပရောဂျက်ကုန်ကျစရိတ် 10 ဒေါ်လာဘီလျံခေါ်သော်လည်းအဘယ်သူမျှမဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ ယခုပင်လျှင်ဒီပိုက်ဆံသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုအမှတ်အသားင်မှလာကြလိမ့်မည်။
ဘယ်မှာကမ္ဘာ့ပင်လယ်အကူးအပြောင်းနှစ်ဦးစလုံး axles အပေါ်ပနားမားနှင့်စူးအက်တူးမြောင်း။ ဤရွေ့ကားလိုင်းများအကွာအဝေးတိုနေကြသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 40 တထောင်ကီလိုမီတာ၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းစေသည်။
အဆိုပါ 47 ကီလိုမီတာခုနှစ်တွင်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ရှည်လျားသောတူးမြောင်းဟာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ E ကိုအဘယ်ကြောင့်သင်လုပ်နေကြတာလဲ
ဒါဟာသူကပြောပါတယ် "စောင့်ဆိုင်းသင်္ဘောစီးတူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်, သူတို့သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့-a-Pat သွားလိမ့်မည်, ဒီကုန်ကျစရိတ်များသိသိသာသာအရှုံးပေါ်ခဲ့, ငါတို့ကကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ " ဖြစ်ပါတယ်
ရဲ့သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့-a-Pat ရှောက်သွားသောအခါရေနံတင်သင်္ဘောကနေချန်နယ်သစ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဘာ Dardanelles ပြုကြလိမ့်မည်ယူဆပါစို့? ထိုအခါမှသာသူမ၏အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာမီတာဖွင့်လှစ်ကြမည်နည်း ရေနံတင်သင်္ဘောအဲဒီမှာစောင့်နေလိမ့်မည်နည်း
သငျသညျဤချန်နယ်ကိုရှောက်သွားကြည့်ရှုရှိရာကနေ 3-5 တံတားလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကဒီကုန်ကျစရိတ်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပြီးပါသလား? ငါမစဉ်းစားကြဘူး။
သင်တို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သော Montreux အဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဤအခြေအနေတွင်ဖြစ်ပါသည်, တခြားနိုင်ငံသင်ပြုသည်အခြားလိုင်းများကနေကြေးစားအဖြစ်ရှောက်သွားရန်သဘောတူကြမည်နည်း ဒါကနိုင်ငံတကာအဆင့်မှာဥပဒေရေးရာပြဿနာကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ ရုရှားဤမျှလောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပွီးနောကျသငျသညျအဘယျသို့သင်ခန်းစာတွေကိုပြုလိမ့်မည် "ငါမဖြုန်းဘူး"? သင်ပိုက်လိုင်းရေနံတင်သင်္ဘောအဘယ်ကြောင့်မှလူကိုရွှေ့ကုန်ကျပြီးနောက်?
သငျသညျ "ငါသည်ရေလက်ကြားအပန်းဖြေရည်ရွယ်ချက်များကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ " ဟုပြော ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စသည်တို့ကိုအားကစားနယ်ပယ်အပန်းဖြေဧရိယာတဝိုက် Kucukcekmece ရေကန်စီစဉ်ရန်ရှာနေပေးထားသော function ကို are've ။ သင်ကိုယ်တိုင်ဆန့်ကျင်။
လုံးဝ Marmara ၏ပင်လယ်ပြင်၏ဂေဟဗေဒကိုပြောင်းလဲအထောက်အထားရှိလျှင်ပင်လယ်နက်တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ဒီပြဿနာတွေကိုအားလုံးဖြစ်နိုင်ချေအစီရင်ခံစာ irdelenip သီးခြားစီအမှုကိုပြုခံရဖို့ရှိသည်။ အစီရင်ခံစာမရှိပါ။ ထိုသို့သောစီမံခန့်ခွဲမှုသငျသညျအလိုတခုတည်း?
ဤသည်ပြည်နယ်၏ပွညျသူပွညျသားအဘယ်မှာရှိအများကြီးဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဤ TOKI ဝင်ငွေခွဲဝေမှုနည်းလမ်းအချို့ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများအားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကြသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးယခုအချိန်တွင်နေဆဲဖြစ်သည်။
ငါအစ္စတန်ဘူလ်၌အလွန်အရေးပါသည်ယခုအချိန်အထိမေးမွနျးခဲ့သညျဆိုပါကအသက်တာ၏ပြင်းထန်သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုများနှင့်အရှုံးနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အဆောက်အဦများ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းထားပါတယ်ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဤသည် 10 နှစ်ကြာပြီးနောက်အခြားစီမံကိန်းအတွက်မြေတပြင်လုံးအစ္စတန်ဘူလ်တင်ဆောင်လာသောနဲ့တူသညျ လာ. အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ပြုလေ၏။
TOKI Channel ကို 30 135 န်းကျင်အစ္စတန်ဘူလ်ကနေဝင်ငွေဘီလီယံအထိလွှမ်းခြုံတထောင်ဟက်တာအောင်မြင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
2002 44 ဘီလီယံကိုပေါင်ကတည်းကစုဆောင်းငလျင်အခွန်အခများ။
ဤတွင်ပြဿနာတစ်ခုငလျင်သည်မဟုတ်, သို့ဖြစ်. ရရှိသောခံရဖို့အရင်းအမြစ်များကိုအဘို့အပြမြေငလျင်ဆင်ခြေလည်းမရှိ။ untested ဖြေရှင်းချက်ပေမယ့်, ထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကိုနှစ်နှင့်ဤသူအပေါင်းတို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှောက်သွားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ကျနော်တို့မြို့ပြဒေသများအတွင်းအသွင်ပြောင်းတွေ့မြင်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အန္တရာယ်များဒေသများနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းမြေပုံမှာကြည့်ပါ။ ဒါကြောင့်မမြင်ရတဲ့၏ခိုင်ခိုင်လုံလုံ, တကယ်မကျြနှာကိုမြေကြီးလှုပ်ခြင်း, ငွေကြေးပြန်ပေါ်မသိမ်းထားပါ။
ဤသည် rant အခါတိုင်း, တိုင်းအစိုးရ, drool ပေါက်ကြားသူနေပါစေ။
ထိုအပေါ်ကြွလာဒီ "၏တပ်" ကိုစတင်။
3 ။ selfie တပ်တံတားမတော်တဆမှု (ဗီဒီယို) စကားကိုနားမထောင်ဘူး
ဘာကူ Tbilisi Kars ရထားလမ်းစီမံကိန်းကိုရပ်တန့်ဖို့ဆိုးရွားပါလိမ့်မယ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Virtualization နှင့်ဘေးဥပဒ်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူရေးစင်တာဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: န်ဆောင်မှုများဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာတွင်စီမံကိန်းဝယ်ယူရေး (TÜLOMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစနစ် (TÜVASAŞ)
AK ပါတီအရူးစီမံကိန်းမုဆိုးက e-5 အတူတက်တန်းစီကမ်းခြေဖို့ကြိုးဆွဲရထားပေါ်မှာ